कोरोनका कारण भारत पनि भयावह बन्दै : मृत्यु हुनेको संख्या २२६ पुग्यो, एकैदिन ४८ काे मृ*त्यु – Online Nepal
कोरोनका कारण भारत पनि भयावह बन्दै : मृत्यु हुनेको संख्या २२६ पुग्यो, एकैदिन ४८ काे मृ*त्यु
April 10, 2020 267
काठमाडौं, २८ चैत । कोरोना भाइरसकाे संक्रमणले दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतको स्थिति पनि भयावह बन्दै गएको छ । भारतमा हरेक दिन मृत्यु हुनेको संख्या र संक्रिमत हुनेको संख्या बढ्दै गएको पाइन्छ ।अहिलेसम्म भारतमा २२६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ हजार ७२५ संक्रमित भएका छन् । विभिन्न तथ्याङ्क निकाल्ने संस्था वर्ल्डो मिटर्स डट इन्फोकाे अनुसार बिहीबार मात्रै भारतमा ४८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८०९ जनको नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् ।
यता संक्रमितकाे संख्या पनि दिनहुँ बढिरहेकाे पाइन्छ । बुधबार मात्रै भारतमा ६०५ जना नयाँ संक्रमित भेटिएका थिए । बिहीबारसम्म संक्रमितकाे संख्या ५ हजार ३११ थियो ।भारतमा कुल संक्रमितमध्ये ६२० जना उपचारपछि निको भएका छन् । बाँकी ५ हजार ८७९ जना उपचाररत रहेको वल्र्डोमिटर्सको तथ्यांकमा जनाइएको छ ।
Prevनेपालगञ्जमा वडाले नै वितरण गरेको राहत- कुहिएको दाल ! जुम्लाभरि म्याद नाघेकाे नुन वितरण
Nextप्रहरीहरुको तलब काट्नु सहि कि गलत ?
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (62221)